Sunday, 06 May 2012 19:19	नागरिक
मनोज दाहाल- आकाशबाट हिउँ खसेजसरी बुरबुर शिरीषका फूल खसिरहेका छन्। साँझ पर्दै गरेको सहर सुन्धाराको बेकरी क्याफेमा आर्द्र र सुगन्धी बनेको छ। ठुल्ठुला शिरीषका रुखबाट खसेका निला फूलले क्याफेका टेबलकुर्सीहरू रंगीन देखिएका छन्।
कति फुल्न सकेका- फराकिलो भुइँमा कार्पेट बिछ्याएजसरी फैलिएका छन्। आँगनभरि झरेका छन्।
बार्बेक्युको अँगेनामा पनि भर्खरै दुइटा फूल झरे र जले।
Saturday, 21 April 2012 19:00	नागरिक
(18 votes, average 4.56 out of 5)
मनोज दाहाल- सुरुमै च्युरा पो ल्याए!
बाल्टीमा ल्याएको च्युरा मेरो लप्ते (पातको थाल) मा हाल्नै लाग्दा मैले हतारिँदै रोक्न खोजेँ, ‘भो, भो, भो, नहाल्दिनुस्।'
‘बजि... अँ... च्युरा नहाल्ने? किन?' बाल्टी बोक्ने दाइ छक्क परे।
‘मलाई मन पर्दैन,' मैले भनेँ।
मन नपर्ने भन्दा पनि च्युरा खाने मेरो बानी छैन। खस्रो च्युराले पेटै हुँडल्छ नि!
अनुहारमा आञ्चलिक प्लटहरू
Saturday, 21 April 2012 18:58	नागरिक
वसन्त बस्नेत- मापसे गरेको ड्राइभर
'झुक्किएको हो भने झुक्किएँ भन्दिनुस्।'
मञ्चअघिल्तिर वारपार राखिएका टेबुलको बायाँ कुनाबाट लेखक उदय अधिकारी कराए। चितवनका रैथाने यी अधिकारी नेपाली साहित्यका त्यस्ता 'लेखक' हुन्, जो लेखकहरूमाझ 'नलेखी नै चर्चित' छन्। उनी पढ्छन्। बेस्मारी पढ्छन्। तर्कले वक्तालाई ठाउँको ठाउँ पानी बनाउँछन्।
४ यात्री, १५५५ किलोमिटर, ९९ दिन (फोटो सहित)
Saturday, 28 April 2012 06:58	नागरिक
(35 votes, average 4.06 out of 5)
सुदीप श्रेष्ठ/श्याम भट्ट, काठमाडौं, वैशाख १६ - १,५५५ किलोमिटर यात्रा गरेर ९९ दिनपछि फर्केका यी चारजनालाई हामीले बुधबार कुपण्डोलको समिट होटलमा एकैचोटि भेट्यौं। कपाल, दाह्रीजुँगा झ्याप्प पालेका। सौरभ भन्दै थिए, 'वनबासबाट फर्केका ऋषिजस्ता देखिँदैछौं, है?'
'ऋषिहरूलाई र्झैँ प्रवचन दिन पनि भ्याइनभ्याइ रैछ।'
'त्यै त, भोलि फेरि टेलिभिजन इन्टरभ्यु छ,' उनले सुनाए, 'त्यही भएर दाह्रीजुँगा नकाटी बसेको।'
चार यात्रीमध्ये आपामात्र 'सफाचट' छन्। बिहान छिटो उठ्ने र हरेक दिन 'सेभ' गर्ने बानी उनले यी ९९ दिनमा पनि कुनै दिन भुलेनन्।
यो यात्रावृत्तान्त खासमा उनीहरूबाटै लेखाउने सोच थियो। तर, भ्याएनन्। त्यसैले, जतिसक्दो उनीहरूकै शब्दमा लेख्न चाह्यौं। चारै जनाले पालैपालो अनुभव बाँड्दै गए। हामी स्वस्थानी सुनेजस्तो एकाग्र भयौं।
सुरुवात स्वाभाविक रूपले दावाबाटै भयो।
विर्तामोडको घरमा सरेपछि जब उहाँ, म र सानी केटी मात्र भयौं, अनि मैले जिस्केजस्तो पारामा खुसी व्यक्त गरेझैं 'सीताजी, लौ बस्नोस्' भनेको थिएँ पहिलो पल्ट। उहाँ पनि खुसीको मुडमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो अभिव्यक्तिलाई खासै महत्व दिनुभएन तर म भने अब हरेक पल्ट त्यही शैलीमा सम्बोधन गरिरहन थालेँ।
Saturday, 14 April 2012 17:41	नागरिक
शोभा शर्मा- उ नाचिसकेर कता गायब भई? धेरै दिनपछि बल्ल आज भेट्ने आँट गरेको छु!
यो हल्लामा मान्छेहरू आफूलाई मिसाउँछन् र बिर्सन्छन्। फेरि पनि एक्लै हुनु त छँदैछ! यो उल्लासमय दुनियाँमा म किन रमाउन सक्दिनँ?
केही मिठो बात गर...गुन्गुनाएँ।
अर्कै केटी स्टेजमा कम्मर मर्काउँदै आइपुगी। केटाहरू चिच्याए। अर्धनग्न केटी जो नाचेकी छ। उसको नाच र देह हेरेर एकै छिन भए पनि मान्छेहरू भुलिरहेछन् आफूलाई। आफूलाई भुल्नु भनेको के सजिलो काम हो र! लाग्छ, उनीहरू महान काम गरिरहेका छन्।
Saturday, 14 April 2012 17:36	नागरिक
मुकुन्द नेपाल- तिमीले नसम्झिँदा माया, बेग्लै हुँदो रैछ...
मोबाइलको सिङटोन बज्यो। मल्लिका कार्कीको स्वरको यो गीत पहिलो चोटि बर्दिबासको सुनगाभा एफएममा सुनेको थिएँ। सुरुमै सुन्दा मन पर्‍यो। ल जा, म पनि के कम, त्यहाँको टेक्निसियन साथीलाई पेनड्राइभमा कपी गर्न लागाएँ। एडब अडिसनमा अगाडिको म्युजिक काटिदिएँ अनि बनाइदिएँ सिङटोन। ब्लुटुथबाट मोबाइलमा सारेँ अनि सेट गरेँ सिङटोनको रूपमा। मोबाइल नर्मल प्रोफाइलमा भएको बेला जसको फोन वा मिस कल जे आए पनि यही बज्ने।
तारा नउदाएको आकाश
किन छिट्टै फर्के भारतीय सेनाध्यक्ष?
पहलमानसिंह स्वारको गाउँमा